Oduu Jibbisiisaa:Namoonni yakka akkasi dalagan adabamani qabamu qabu! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Jibbisiisaa:Namoonni yakka akkasi dalagan adabamani qabamu qabu!
#Oduu_Jibbisiisaa: Namoonni yakka akkasi dalagan adabamani qabamu qabu!
Guyyaa har’aa Magaalaa #Baddeesssaa Goodiina Harargee lixaa Keessatti namoonni magaalaa keessa jiraatan #Waaqeffattoota fi Galma Amantii Waaqeffaannaa jeeqaa jiraachuun beekameera.Namoonni Waaqeffattootaa fi Galma Amantii Waaqeffannaa Irratti dhiibbaa geessisan Seeratti dhiyaachuu qabu.To’annoo Seeraa jala galuu qabu.
Amantiin Waaqeffannaa Amantii Abboota keenyaati.Heeraa fi Qajeelfama Warri Lafaa fi Lafee nutti dhiisanii darbanii ture.Akka amantii biroo Alaa nutti hin dhufne.Amantii fi Qajeelfama Uummata Oromooti.
Kanaafuu Nuti Obsaa fi Gidiraa hedduu keessa dabarree waan as geenyeef Waaqeffattoonni bakka jirrutti Tasgabbaa’uu fi Obsa qabaachuu qabna.
Dhalootuma Nu Jeeqaa jiru kanaaf hojjanna waan ta’eef Obsi barbaachisaadha.Namoonni hokkara akkasii kaasan ammoo Ija seeraatin Ilaalamee To’annoo seeraa jala galuu qabu.
Kun Seenaadhanis ta’ee Seeranis ni gaafachiisa.
Dhugaan haa moo’u
Ofdhabuun haa dho’u.
Humneessaa Nagaasaa Intalee
Daawwit Taddasee jedhama eda magaalaa Mandiitti RIB qabame. Erga araarii bu’ees hidhaa fi ajjeechaan Oromoo irra hin dhaabbannee. Koreen araara guyyaa lamaaf miidiyaaf ibsa kennina jedhani Achumaan hafan
“Obsa qabaadhaa kan nama hidhaa jiruu eenyu akka ta’e suuta jennee adda baafanna biyyattii keessattii qaamni hidhatee jiru baay’eedha jedhu warri intinaa.erga qaamni biraas hidhatee jira ta’e ABO n yeroo mara Maalif sababa ta’aree Taatewwan kamiifiyyuu?”
Qaamni mootummaan alaa kan nama hidhaa jiru kuni erga caasaa mootummaatin hin bulle eyyema mana hidhaa biyyattii keessatti ijaarrachuu way Ameerikaatu laatefii laata?
Waanuma hin jirreem!!!
Oromoon gochaa diinaatiin ni jabaata malee hin baaragu!
“Ajaa’iba har’a immoo homaan waraana ganama barii sa’aa 11: 30 irraa eegalee hanga 12:45 mana jireenyaa Caaltuu Taakkalaa kan harmee ishee sakkatta’umsa guddaa gaggeessanii bahan.”
Ilmaan Oromoo Hundaaf
Shira Abidda Hin Dhaamne Qabsiisuuf Xaxamaa jiru Oromoon hundi itti dammaquu qaba. Shirri namoonni sammuu seexanaa fi bulguu baatanii deeman xaxaniin Oromiyaan jaalannuu fi Oromummaan nuti ittiin dhaadannu diigamuuf deemti. Keessattuu shiraa fi dabni namoonni muraasni #naannummaa fi #gandummaan wal ijaaranii xaxaa jiran tokkummaa fi egeree Oromoof balaa guddaa baatee as deema. Akka odeeffannoo keessaa beektonnii fi aanga’oonni mootummaa gameeyyiin saaxilaa jiranitti ABO balleessuu qofa Osoo hin taane Lammaa Magarsaallee Pirezidaantumaarraa darbachuuf #teamlammaa sana cabsanii aangoo dhuunfachuuf gartuu #teamkamaal jedhuun harka wayyaa jalaan gandummaarratti hundaa’ee ijaarameen daba guddaatu xaxamaa jira.
Gartuu kana kan ijaaranii fi Shira kana xaxaa jiran:
1. Janaraal Kamaal Galchuu –(Itti gaafatamaa dhimma nageenya Oromiyaa
2. Janaraal Biraanuu Juulaa_ I/A/Itti gaafatamaa RIB
3. Koloneel Kafyaalew (Ajajaa komaandi poostii Lixaa fi kibba Lixaa)
4. Xayyibaa Hasan I/A/Pirezidaantii Oromiyaa
5. Alamuu Simee
6. RIB keessaa Qondaalota lama kan maqaa isaanii yeroof hin arganne
Adda durummaa aangaa’ota mootummaa fi raayyaa ittisa biyyaa keessatti wal ijaaranii shira sheexanummaa xinsisaa jiran Kanaan seenaa gurraacha kan Oromoo bara baraan addaan diiguu fi Oromiyaallee bittinneessutu dhalachuuf deema.
Gareen kun Shira raawwachuuf akeekkatan kana hojiitti hiikuuf karoora guguddaa #afur lafa kaawwatan.
!ffaa. Janaraal Biraanuu Juulaa fi Kaffaaloon humna guddaa RIB harkaa qaban fayyadamuun WBO-tti duuluun dhabamsiisuu. Kana gochuuf humna qilleensaa dabalatee waan qaban hunda itti fayyadamuudhaan humna WBO cabsuu.
2ffaa. Hogganoota ABO hundumaa mana hidhaatti galchuu fi warra didan dhabamsiisuu. Miseensotaa fi deeggartoota ABO Oromiyaa guutuurraa guuranii hidhuu fi jumulaan guuranii kaampiilee guguddaa akka dhidheessaa fi xollaayitti naquu.
3ffaa. Jaalala ABO’n Oromoo biratti qabu balleessuuf olola gama hundaan irratti oofuu; maqaa xureessuu fi kaayyoo ABO busheessuu; uummata doorsisuu fi sodaachisuu.
4ffaa. Dhuma irratti Lammaa Magarsaa aangoo irraa darbachuu fi #teamlammaa rukutuun ofii itti darbuu.
Karoora isaanii kanaaf hojjetaa jiraachuu isaanii agarsiituu hedduutu jiru.
Gartuun Kamaal Galchuu kan gandummaa fi naannummaan of ijaaranii #teamkamaal ofiin jedhan kun yeroo ammaatti caasaa fi seera mootummaallee eeganii hojjetaa hin jiran. Ofiin buloodha. Fakkeenyaaf,Kamaal Galchuu itti waamamni isaa Pirezidaantii Oromiyaaf ta’ee osoo jiruu Lammaa Magarsaaf ajajamaa hin jiru. Dhimmichi MM Abiyyi Bira ga’us innis furmaata itti kennuu hin dandeenye jedhama. Kamaal Galchuu maqaaf itti gaafatamaa dhimma nageenyaa O Oromiyaa haa ta’u malee oolmaa fi hojiin isaa dhimma federaalaa keessa galuun kan Jeneraal Biraanuu Juulaa fi Kaffaaloof karooora akkasii baasaa jiru isadha. Gareen kun naannummaan wal ijaarte waan ta’eef wal-amantaan fi abjuu nutu caalaatiin maraatanii halkanii guyyaa akka hojjetaa turanii fi jiran beekameera.
Hogganoonni ABO amma hidhaa jiran akka hidhaman kan ajaja dabarseKamaal Galchuu ta’uus keessa beektonni kun saaxilaniiru. Hogganootaa fi miseensota ABO hidhaa jiran irratti gidiraafi hiraarsi (torture) kan wayyaaneen raawwachaa turtee olitti suukaneessaa ta’e raawwatamaa jiras jedhama.
Kanaafuu gartuun gandummaan machooftee safuu fi ittigaafatamummaa tokko malee uummata Oromoo diiguuf jirtu kun bakka jirtutti akka dhaabbattu Oromoon dhibbaa irratti gochuu qaba. Gartuun #teamkamaal jedhamu kun ABO balleessuu qofa irratti hin dhaabbatu. Shira gartuun #TeamKamaal xaxa jiruun #teamlammaan kan amma aangoorra jiru mataansaa rukutamuuf deema.
Kana birattis #team kanaa alatti kan of ijaaranii isaan kanaa waliin wal gaarreffatanis ni jiru.
1. Jeneraal Hayiluu Gonfaa
2. Taayyee Danda’aa
3. Koronel Abbabaa Garasuu fi isaan waliin kan ijaaraman namoonni biroonis ni jira. Haata’u malee Waanti beekamuu qabu garuu eenyullee shiraa xaxus, hogganootaa, miseensotaa fi deeggartoota ABO hidhus qabsoon Bilisummaa Oromoo itti fufa. WBO’n haa jiraatu. Kan Oromiyaa jaallatu, kan Oromummaan akka hin banne barbaadu hundi daandii argate hundaan WBOtti dabalamuu qaba. Gandummaa fi gosummaan wal ijaartee warra Oromoo diiguu barbaaddu dura dhaabbanna. Yoomiyyuu Oromoon tokko. #teamkamaal diina tokkummaa Oromooti.